Madaxweyne Qoor-qoor oo daahfuray mashruuc cusub oo laga fulinayo Galmudug (Sawirro) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweyne Qoor-qoor oo daahfuray mashruuc cusub oo laga fulinayo Galmudug (Sawirro)
dhanka kale Wasiirka Waxbarashada Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa sheegay in Madaxweynaha Galmudug uu dhagax dhigay xarun cusub oo loo dhisayo Wasaaradda Waxbarashada si ay halkaasi ugu shaqeeyaan.
Maxamed Xaashi Dhoore oo wareysi gaar ah siiyay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in munaasabad kooban oo lagu dhagax dhigay xarunta cusub ay ka soo qeyb galeen madaxda Wasaaradaha Amniga iyo Maaliyadda ee Galmudug iyo xubno kale, isagoo intaa ku daray in xarunta la dhagax dhigay ay ka dambeysya markii Wasaaradda Maaliyadda Galmudug ay ogolaatay in dhulka lagu wareejiyo Wasaaradda Waxbarashada.
“Madaxweynaha Galmudug ayaa dhul ay Wasaarada maaliyadda lahayad siiyay Wasaaradda Waxbarashada, runtii howl fiican ayay noo ahayd, Madaxweynaha ayaa dhagax dhigay, waxaana ka soo qeyb galay Wasiirada Maaliyadda iyo, Amniga ee Galmudug iyo xubno kale, runtii xarunta naloo dhagax dhigay wax badan ayay Wasaaradda u tari doontaa marka la dhiso, maadaama aan hadda ku shaqeyno afar qol.” Ayuu yiri Wasiirka Waxbarashada,’
Mudane Maxamed Xaashi Dhoore ayaa xusay in tani ay bilow u noqon doonto howlwadeenada Wasaaradda sidii ay ku heli lahaayeen xafiisyo ay ku shaqeeyaan marka la dhiso goobta la dhagax dhigay, isagoo xusay in xafiisyada hadda dhisan lagu wareejin doona waaxda Imitxaanaadka ee Wasaaradda Waxbarashada Galmudug.
Wasiirka Waxbarashada Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa ugu baaqay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Galmudug ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dadaallada lagu horumarinayo tacliinta dadka iyo ka qeyb qaadashada dib u dhiska xarumo waxbarasho oo tayaysan.
“Waxaan rabnaa in adeegyada waxbarasho ee ka jirta deegaannad galmudugu ay noqotay kuwa la jaan qaadi karo caalamka, waxaana doonaynaa inaan soo kordhino hannaan cusub oo dhanka waxbarashada lagu horumarin karo”. Ayuu yiri Wasiir Maxamed Xaashi.
Madaxweyne Qoor-qoor oo daahfuray mashruuc cusub oo laga fulinayo Galmudug (Sawirro) was last modified: August 30th, 2020 by Admin